သံမဏိ Chilling ပစ္စည်းများ
စားနပ်ရိက္ခာ Tray ထဲမှာ
အဆိုပါဝီစကီ Lover များအတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်
အဆိုပါဝိုင် Lover များအတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်
ကော့တေး Lover များအတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်
Host က & မူလစာမျက်နှာများအတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်
ဝီစကီကျောက်ခေတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်သတ်မှတ်မည် dilution မရှိဘဲသင်၏အရက်များ Chilling!
Flavorless & အနံ့! non-စိမ်ပိတ်သောကျောက်သည်သင်၏ဖန်ခြစ်ရာမရလိမ့်မည်!
Host က & မူလစာမျက်နှာများအတွက်ခေတ်သစ် & Funny & သဘာဝလက်ဆောင်များ!
XIAMEN SHUNSTONE ထိုကဲ့သို့သော Brige-ကြီးတွေ Cutter, auto-Polish စက်, CNC ထွင်းထုခြင်းအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုပိုင်ဆိုင်, 18000 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးအုပ်ထား, ကျောက်စက်မှုလုပ်ငန်း-Shijing မြို့၏ဗဟိုအတွက်တည်နေရာ, 20 နှစ်အတွေ့အကြုံနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြောကျခဲစက်ရုံဖြစ်ပါသည် နှင့်ရေ-ဂျက်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်။ R & D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု 10 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်သားများရှိပါတယ်။ ကြောင့်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်း, အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးခြင်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုပ်ပိုးခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မား, ငါတို့ထုတ်ကုန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူကြိုက်များကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သည်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များကျေနပ်အောင်တစ်ခု All-ထွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု Make!
1990: မစ္စတာ Ditu သည်သူ၏သောကျောက် careen စတင်တည်ထောင်သူ
1995: အဆိုပါတည်ထောင် 1st စက်ရုံ ဒေသခံတစ်ဦးကြောကျကိုပေးသွင်းအဖြစ်, တဦးတည်းစက်များတွင် Multi-ရှုးအတူ။
2000: G636 နှစ်ခုကျောက်မိုင်းပိုင်ဆိုင် 1st စက်ရုံစကေး3ကြိမ်တိုးချဲ့။
2001: သူတို့၏မြင့်တောင်းဆိုမှုကိုကြောင့်ပို့ကုန်စီးပွားရေး, ဂျပန်၌ပထမဦးဆုံး client ကို, Started ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အသွေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရင့်ကျက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
2005: 70% တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းပိုထုတ်ကုန်လည်းအလွန်ကောင်းလှ၏။
2008: ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတစ်နည်းနည်းဆင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတင်ပို့, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ output ကို 300% တိုးပွားလာသည် 2nd စက်ရုံ တည်ထောင်ခဲ့သည်။
2009: အလီဘာဘာအတွက် Join နှင့်ကမ္ဘာကျော်ရောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။
2010: 3rd စက်ရုံ ကျောက်ခေတ်အနုပညာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Developer (ဝီစကီကျောက်, ဝီစကီလက်ဆောင်တွေ, ကျောက် Coaster, ကင်ကျောက်, ... )
2013: အမေရိကန်ရဲ့စျေးကွက်၏တိုးပွားလာမှုနှင့်အတူရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်ရှိသစ်သားအထုပ်စက်ရုံ 40% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, 4th စက်ရုံ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
2017: ဗြိတိန်နိုင်ငံက client များ၏အကြံပြုချက်အပြီးတွင်အဆိုပါကျောက်သလင်းဖန်စျေးကွက်ပူဖြစ်ပါသည်, Shanxi ပြည်နယ်ရှိ Crystal Glass ကိုဖလားစက်ရုံ 30% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
အခုတော့သည်အထိ: အမေရိကန်, ဗြိတိန်, ဥရောပများ၏ဈေးကွက်ထဲမှာအလီဘာဘာနှင့်အတူဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ။ ကြောင့် SHUNSTONE ONE-STOP Customer Service မှကျနော်တို့က, လမ်းကြောင်းသစ်နောက်တော်သို့လိုက်မြှင့်တင်ရေးပြုသောအမှုများနှင့်စျေးကွက်အနေဖြင့်ကောင်းသောတုံ့ပြန်ချက်ရတယ်။
ကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ကုန်စည်, တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှု, တိုင်းအပိုင်းအစ QC, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အထုပ်, OEM & လိမ္မော်ရောင်ဒီဇိုင်း, အထူးစိတ်ကူး, ငါတို့ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုပြီးတော့ 40 နိုင်ငံများတွင်လူကြိုက်များကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ 18000square မီတာဖုံးလွှမ်း
20years အတွေ့အကြုံ, အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက် Professional ကကြောကျခဲစက်ရုံတွင်
R & D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက် Professional ကအလုပျသမား
SHUNSTONE GROUP CO ။ , LIMITED
ဝီစကီမျက်မှန်လက်ဆောင်သတ်မှတ်မည်, ဝီစကီကျောက်ခဲအရက်ဆိုင် , ဝီစကီလက်ဆောင်များ , ဝီစကီမိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက်လက်ဆောင်များ ,